Ciidamada dowladda la wareego cusub & Xubno la dilay
May 27, 2020 Mahad Jama 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Ciidamada dowladda Somaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay howlgalo culus ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirasn Ururka Al-Shabaab.
Saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa waxa ay sheegeen in intii ay howlgalka ku jireen ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena ay la wareegeen deegaano iyo fariisimo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen.
Taliyaha Guutada 22-aad ee taliska qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Gaashaanle Dhexe Maxamuud Xasan Ibraahim ayaa sheegay inay la wareegeen deegaano ay kamid yihiin, Afcad, Ceel-bacad iyo Aboorey, kuwaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Sidoo kale taliyaha waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee laga fulinayo deegaanada yo degmooyinka gobolka Hiiraan ilaa laga saarayo Al-Shabaab.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanada howlgalka laga fuliyay ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan isla markaana ciidamada dowladda ay weli wadaan howlgalo kala duwan.
Madaxda dawlad gobaleedyada oo maanta tagaya Dhuusa-Mareeb & Wafdiyada ugu soo horeeya.
Puntland oo shaacisay kiisas hor leh oo cudurka Coronavirus ah
Puntland 22 sanno ka dib, Maamul gobaleedyada kale miyaa ka hormaray?
Kulamo ka socda Buuhoodle & Isimo xal raadin ah oo ku sugan
DAAWO: M/weyne Deni oo faahfaahin ka bixiyey shirka magaalada Dhuusa-Mareeb & Waxa laga filan karro
DAAWO: Galmudug oo beenisay in ciidamada HARAMCAD laga saarayo Dhuusa-Mareeb & Gaadiid aan xabadu karin.
DAAWO: Maxkamadda ciidamada Qalabka sida oo Dil toogasho ah ku riday Askari qof shacab ah ku dilay Xabad sigaar ah
Ciidamada Haramcad ee DFS oo maanta dib loogu celinayo magaalada Muqdisho, lagana saarayo Dhuusa-Mareeb.
DABEYLAHA GEESKA AFRIKA IYO DURUUFAHA SOOMAALIDA!
WARBIXIN:Dhibaatada Qaadka, Qalbiyo u ooman farxad & Isbadal ka dhacay goboladda dalka
DAAWO: Yaa qaatay Libinta Siyaasadeed ee isku keenida Dawlad gobaleedyada dalka & DFS?
Maxaad kala socotaa Colaada Buuhoodle, jawaabta Puntland & Qorshaha Somaliland ay damacsan tahay?
XOG: Madaxdii hore ee Jabhaddii SSC oo ku kulmay Buuhoodle, Maxayse ka wada hadleen?
Madax Dhuusamareeb ku wajahan & Amaanka oo la adkeeyey